३३. नकारात्मकताको उपयोगिता - Harish Bk
Home/ Article/३३. नकारात्मकताको उपयोगिता
Harish BK December 28, 2017
Dr. Yogi Vikashnanda: रवीन्द्रनाथ टैगोर एक महान् साहित्यकार हुन् अझ कतिपयले उनलाई महा मानवसमेत भन्न् चुक्दैनन् । उनले कसरी यो महानताको शिखर छोए भन्ने प्रश्न उठ्दो हो । यस प्रश्नको जवाफ खोज्न उनको बाल्यकाल खोतल्न सकिन्छ ।
रवीन्द्रका बाबु देवेन्द्रनाथ सधँै समाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रममा व्यस्त रहन्थे भने उनकी आमा दीर्घ रोगी थिइन् परिणाम स्वरूप रवीन्द्रको वाल्यकाल नोकर–चाकरहरूको रेखदेखमा बित्यो । यस प्रसंगमा श्याम भन्ने एउटा नोकरको रवीन्द्रप्रतिको व्यबहार उल्लेखनीय छ ।
श्याम भन्ने नोकरले प्रायः घरमा लक्ष्मण–रेखाजस्तै घेरा बनाउथे र रवीन्द्रलाई त्यसैभित्र कैद राख्थे र भन्थे —जबसम्म म फर्केर आउँदिन तबसम्म तिमिले यो घेरा तोडेर बाहिर जान पाउँदैनौं ।
यसरी उनी प्रायः घण्टौँ यस्तो घेरामा फँस्थे । अब यस्तो बेला गर्ने के त ? मान्छेले अझै गर्न सक्ने रचनात्मक कुरा बाँकी होलान् त ? अवश्य छ, त्यो हो कल्पनाशील बन्नु । यसरी सुरूका दिनहरूमा उनी कल्पनाशील हुन्न वाध्य भए÷पारिए । र त ती दिनमा उनले कल्पनै कल्पना गरेर समय बिताउथे ।
पछिल्ला दिनमा सबै बच्चा–बच्चीजस्तै उनी पनि स्कुल जान थाले । तर, पढाइमा उनको मन पटक्कै जांदैनथ्यो । शिक्षकले पढाउँदै गर्दा उनी कल्पना–लोकमा विचरण गरिरहेका हुन्थे । परिणामस्वरूप उनले बारंबार शिक्षकहरूको गाली खान्थे । एक जना शिक्षकले उनलाई सम्बोधन गर्दै यहाँसम्म भन्न भ्याए कि— तिमी बिल्कुल मूर्ख हौ, तिम्रो दिमागमा गिदी हैन, गोबर भरिएको छ । तर, पढ्नमा पट्क्कै मन नगर्ने यस बिग्रिएको भनिएको केटाको मनभने चित्रकला, संगीतकला, र साहित्यमा बेस्सरी लाग्थ्यो । यिनले पछि कल्पनाकै आधारमा एक कालजयी महान काव्य लेख्न भ्याए— गीताञ्जली । र, यसै कृतिको कारण उनी सन् १९१३ को साहित्यमा नोबेल पुरुष्कारबाट सम्मानीतसमेत भए ।
यदि उनलाई श्याम भन्ने नोकरले निश्चित घेरामा थुनेर राख्नेजस्ता नकारात्मक घटना नघटाएको भए उनको कल्पना शक्ति त्यति प्रखर हुने थिएन, त्यस्तै उनका शिक्षकले मूर्ख भनेर सम्बोधन नगरेको भए उनलाई विद्वान बन्ने झोंक चल्दैनथ्यो र उनी यति प्रखर बन्दैन थे, अनि नोबेल पुरुष्कार कहाँ पाउँथे ?